မျက်နှာပြောင်တဲ့ ချစ်သူမိန်းခလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အားသာချက် (5) ခု
HomeLoveမျက်နှာပြောင်တဲ့ ချစ်သူမိန်းခလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အားသာချက် (5) ခု
သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေးဟာ အမြဲတမ်း ရယ်စရာ ဟာသတွေ ပြောပြီး မျက်နှာပြောင်တတ်သူ တစ်ယောက်လား ။ ဟုတ်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး လူသား တစ်ယောက်ပါ။
ယောင်္ကျားလေးဆန်ပြီး ဟာသဉာဏ် ထူးကဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူအပေါ်မှာ ယုံကြည်စိတ် အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့အပြင် ဘဝခရီး တစ်ခုလုံးကိုပါ သင်နှင့်အတူ ဖြတ်သန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလို ကောင်မလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားခွင့်ရတဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ဘယ်အချက်တွေဟာ ကံကောင်းစေလဲဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
ဒီလို ကောင်မလေးတွေဟာ သာမန်ထက် ထက်မြက်ထူးကဲတဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ပိုင်ဆိုင်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးကို ဘယ်လိုပျော်ရွှင်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ အမြဲ တွေးတောနေတတ်ကြသူမျိုးဖြစ်ပြီး ဖြူစင် ရိုးသားမှုကို အရမ်း ခုံမင်တတ်ကြပါတယ်။
အချို့သော ကောင်မလေးတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလှအပတွေကို အထူးအာရုံစိုက်ပြီး တစ်ဖက်သားက မိမိအပေါ် တစ်မျိုးမြင်မှာစိုးလို့ တမင်လုပ်ယူထားတဲ့ အမူအယာတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ မျက်နှာပြောင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကတော့ ဒါတွေကို နိုးပါ ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ အားလုံးကို အရင်းအတိုင်း ပြောဆို ဆက်ဆံပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလှအပတွေကိုလည်း လိုတာထက်ပိုပြီး ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။
3. ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝကြတယ်
လူအများကြားထဲမှာ ရှက်ရွံ ကြောက်ရွံ့တာမျိုး လုံးဝမရှိပဲ ပြောဆို လုပ်ကိုင်စရာ ရှိတာတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်သူ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်လည်း ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ ထားတတ်ပြီး အရင်းနှီးဆုံးအဖြစ် နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။
4. တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးကို လေးစားတယ်
သူမဟာ ကောင်မလေးဖြစ်လို့ သူ့ချစ်သူ ကောင်လေးအပေါ်မှာ အမြဲချွဲနွဲ့ မှီခိုနေတတ်မယ့်လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ပြသနာ အခက်အခဲ မှန်သမျှကို အတူတကွ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတတ်ပြီး သင်လိုအပ်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ၊ အကူအညီတွေကိုတောင် သူမဆီက ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
5. ဘော်ဒါလိုပါ ပေါင်းလို့ရတယ်
သင့်အတွက် ချစ်သူတစ်ယောက်လိုသာမက ဘော်ဒါတစ်ယောက်လိုပါ အမြဲတမ်းအသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ချစ်သူသမီးရည်းစား ခံစားချက်ထက် ရဲဘော်ရဲဘက်လို စိတ်ခံစားမှုကို ဒီလို ကောင်မလေးတွေနဲ့သာ ခံစားရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘော်ဒါတို့ထဲမှာလည်း ဒီလိုကောင်မလေးမျိုးတွေ ရှိမှာပါနော်။ သူတို့ကိုပါ mention ခေါ်ပြီး ဒီစာလေးကို ဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါအုံး။